२०७४ फाल्गुण २३ बुधबार ०५:५२
शुसिला ठगुन्ना महाकाली नगरपालीका ४ दार्चुला
नेपाल सरकारले पनि प्रयास नगरेकै हो त भन्दैनौ नेपाल सरकारले पनि प्रत्येक बर्ष नोबेम्बर २५ तारीख देखी १० डिसेम्बर सम्म महिला हिंसा बिरुद्ध अभियान चलाई रहेको हो त्यो हामी महिलाको लागी एकदमै खुसीको कुरा हुन जान्छ । तर पनि किन यो हिंसा भन्ने ले महिलाहरुलाई यति माया गरेको जहिले पनि हाम्रो सचाजमा पछि नै लागी रहने गर्द छ । यो महिला हिसां गर्नु हुदैन सबै महिला दिदी बहिनी आफ्नै आमा सरह मान्नु पर्छ ! महिला हिंसा अन्त्य गर भनेर नारा बाजी किन गर्छन । मलाई त लाग्छ यो महिला बिरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य हैन महिलाको नाम बेचिरहेका छन किन ठुलठुलो सभामा महिला र पुरुष बराबर हुन भनेर पुरुषहरुले झुटो भाषण ठोक्छन । उसो त महिला हिंसामा नै छन । तर किन सबैको मुखमा महिलाको नाम सस्तो भएको होला नी ? सायद महिलाले जति दःुख ,कष्ट, घर्ति भएर जुन सुकै पिडा पनि सहन तयार छ र हलिे सम्म सहेर पनि बसेका छन । पुरुष नाम बाट नामाकरण गरीएका हाम्रा पुरुष प्रधान देशका पुरुष भनौदाहरु ठुलो मननिय पोष्टमा काम गरीरहेका छन । महिला हिसां बिरुद्धको कार्यक्रम पनि गरी रहेका छन । आजभोली मात्रै महिला हिसा नगरौ , महिला हिंसा अन्त्य गर भनेर घाटी सुकुन्जेल सम्म सडकमा नारा लगाएर गाँउ घरमा पुग्का छन । भन्छ श्रीमतिलाई खाना खोई तर बिचरी महिला भएकै कारण त्यो धर्तिमाता श्रीमति बिहानै बाट भ्यई नभ्याई काम त गरेकै हो केटाकेटीहरुलाई नास्ता बनाए स्कुल पठाए अनी समयले यतिनै भ्याइयो भन्दा खेरी ति पुरुष भनौदा महान व्याक्ति ओछ्यानमा पुगेको खाना खाएर थालमा हात धुनेले भन्छ तैले अहिले सम्म जाबो खाना बनाई सकिनस ? साला तेरो कामै छ्रैन अर्की श्रीमति ल्याउछु भन्छ । नाना भाती गाली गर्छ ,कुट्छ ।यो कुनै काल्पनिक होईन । सत्य ,तथ्य ,भोगेको , देखेको यो नै सत्य हो । आखिर त्यसले सडकमा लगाएका महिला हिसंष विरुदका नाराहरु पनी नसुनेको कहाँ हो त्यही मान्छेले महिला माथी हिंसा नगर भनेर नारा लगाएर आको होईन र ? के यो हिंसा होइन ? किन त्यसले बुभ्mने प्रयास गरेन म मेरी श्रीमति माथी हिंसा गरीराछु भनेर । सायद हाम्रो समाजमा पहिलेबाटै चलीआएको बुबुबाजेको रितिरिवाज परम्परा जस्तो भईरहेको छ त मलाई प्रश्न गर्ने मन लाग्यो यो पुरुष प्रधान देशका पुरुषहरुलाई जोगाएर राखेको पो हो कि?
के साँचिकै महिला हिंसाको अत्य गराउनु छ भने सबै पुरुषहरुले आफ्नो घरमा गरिने व्यवहारको सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
हाम्रो दुर्गम गाउँ ठाउँ समाज बाट यो हिंसा भन्ने शब्दको पुनः नामाकरण गर्नु पर्ने छ । हुन त महिला को वकालतमा काम गर्ने सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरु छन । तर पनि किन हिंसा भन्ने शब्दको न्युनीकरण गर्न सकेन त ? यो हिंसा भन्नेको हामीले नै त जन्म दिएको हो नी । कुनै प्राकृतिक प्रकोप त होईन नी कसैले यसलाई न्युनीकरण गर्न नै सक्दैन भन्नको लागी हिंसाको जन्म हामा्रे समाजले नै त दिएको हो यसको न्युनीकरण गर्नु पनि त हाम्रौ जिम्मेवारी होईन र ? किन महिला हिंसाका घटनाहरु यति धेरै सुनीन्छन । मान्छौ हामी महिलामात्रै हिंसा पिडित छन भन्दैनौ न्युनतम मात्रामा पुरुष पनी पिडित होलान । तर महिला जति हिंसमा परेका छन त्यती पुरुषपनि परेका भए यो समाजको छिटै परिवर्तन भईहाल्यो । मलाई त लाग्छ श्रीमतिलाई त भन्ने शब्द बाटै हिंसा छ । किनकी श्रीमतिलाई अलानो त फालानो भन्न मिल्छ र पो पुरुषले जे पनी भन्न सजिलो मान्छ । तर महिलाले भने हजुर तपाई भन्नु पर्ने तपाई भन्ने शब्दले नै त शब्दलाई होच्याउँछ । तपाई शब्दले त लाई कहिले स्थान दिन सक्दैन त्यसैगरी पुरुष भन्ने शब्दले महिलालाई स्थान दिन सक्दैन । त्यसैले महिला पुरुष समान बनाउँनु छ भने त र तपाई हामी बाटनै सुरु गर्दा सजिलो होला । आखिर महिला हिंसा नगरौ अन्त्य गरौ भन्ने जस्ता नारा लगाएर प्लेकार्ड हातमा बोकेर , महिला हिंसा बिरुद्ध को १६ दिने अभियान चलाएर मात्रै त होईननी । साच्चीकै महिला हिसा बाट मुक्त नै होउन भन्ने लाग्छ भने सबै भन्दा ठुलो हात पुरुषको नै छ । पुरुषले नै हामी महिलालाई हात र साथ दिनु जरुरी छ । कति सुन्नु पर्छ हामीले आज एक महिलाको कुटपिटकाट ज्यान गयो , भोली सामुहिक बलात्कार भयो । छि सुन्न नी लाज लाग छ । कति खेर त लाग्छ महिला हुनुमा धिक्कार छ । तर अहँ ! हामी महिलाले हार खाएर हुदैन आखिर यो पापी धर्तीमा जन्म लिईसके पछि संघर्ष गर्नु जरुरी छ । आफ्नो हक अधिकार सुनीश्चित गर्नकोलागी सबै महिला दिदी बहिनीले हातेमालो गर्नु जरुरी छ । हामी सबै महिलाको सुवेक्षा छिट्टै महिला हिंसा सम्बन्धि नारा बाजी गर्न नपरोस सबैमा चतना भया ।